Arteta oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Özil inuu ka tagayo Arsenal inta lagu gudi jiro bishan January – Gool FM
(London) 15 Jan 2021. Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa shaaca ka qaaday dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa wararka la xiriirinaya Mesut Özil inuu baxayo bisha January.
Magaca Mesut Özil, oo 32 jir ah, ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo safka kooxdiisa Arsenal, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xilliga qaboobaha, kaddib markii uu si toos ah looga saaray liiska xiddigaha uu hoggaamiyo tababaraha reer Spain ee Mikel Arteta.
Fenerbahce ayaa loo arkaa inay tahay kooxda ugu cad cad ee la saxiixan karta Mesut Özil, gaar ahaan kaddib markii kooxda ay xaqiijisay inay jiraan wadahadalo adag oo lala yeeshay ciyaaryahanka reer Germany.
Haddaba Mikel Arteta oo a hadlayay wararka la xiriirinaya Mesut Ozil inuu baxayo bisha January ayaa wuxuu yiri:
“Hagaag, run ahaantii, ma garanayo sida uu ugu dhowaa inuu ku biiro Fenerbahce.”
“Isku soo wada duuboo, waxaa jira wadahadalo qaar oo lala yeelanayo Edu Gaspar iyo kooxda waqtigan, laakiin wali ma jiraan wax la taaban karo.”
Waxaa xusid mudan in heshiiska Mesut Özil ee kooxda Arsenal uu dhamaan doono xagaaga 2021.